सवै ठाँउमा पुग्न सक्ने, समस्या बुझन सक्ने पार्टी सभापतिको आवश्यकता : रुपनारायण जबेगू « Phidim Today
सवै ठाँउमा पुग्न सक्ने, समस्या बुझन सक्ने पार्टी सभापतिको आवश्यकता : रुपनारायण जबेगू
Published on: 22 May, 2019 12:57 am
नेपाली काग्रेस पाँचथर यतीखेर जागरण अभियानमा छ । आन्तरिक समस्याका कारण थप समस्यामा परेको काग्रेसलाई यो अभियानले सफल बनाउला कि नबनाउला समयले बताउने छ । सोही अभियानसंगै समग्र नेपाली काग्रेसका बारेमा पत्रकार जितेन्द्र भण्डारीले नेपाली काग्रेस पाँचथरका सचिव रुपनारायण जबेगूसंग गरेको कुराकानी आजको टुडे संवादमा ।
शिक्षण शेसाबाट कसरी राजनीतिमा आउनुभयो ?
म राजनीतिमा आउनुको मुल कारण म बहुदलको पक्षमा थिए । म बहुदलको पक्षमा हुनुको कारण मेरो बाजे मानबहादुर जबेगुलाई उम्मेद्वार हुनुहुन्थो । २०४६ सालको चैत अन्तिमतिर नेपालमा बहुदलिय प्रजातन्त्र प्राप्त भयो । सो प्राप्ती पश्चात नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएपछि एक सदस्य भएको हौसियतले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी बन्दै विभिन्न संग संस्थाहरुमा सहभागी बन्दै नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य बन्दै राजनितिमा संलग्न भयौ । जब म पेसामा भएको बेलामा बाँकी रहेको समयमा विभिन्न विकस निमार्णका काम तथा समाज सेवमा संलग्नभएर राजनितिको सुरुवात गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य भएको हौसिहतले विभिन्न अधिवेसनमा सहभागी बन्ने अवसर प्राप्त भयो । म विस्तारै राजनीतिको सुरुवात गरेको हो ।
तपाई शिक्षक हुँदै राजनीतिमा आउनु भो केही गुमाए जस्तो लाग्दैन ?
जब म नेपाल शिक्षक युनियनमा अध्ययक्षको रुपमा थिए जनु पद म एक नेपाली कांग्रेसको सकृय सदस्य भएको हौसीयतले पाएको हो । शिक्षक युनियनमा अध्ययक्षमा रहदाँ हाम्रो जिल्लामा धेरै भौतिक पुर्वआधारहरु शिक्षकको अवस्थाको हकहितको कुरा, समस्याहरु तथा शैक्षिक गुणस्तरको कुराहरु सम्मालेर जानेर धेरै नीति बनाएर अगडी बडाउने अबसर पाएको थिए । नेपाल शिक्षक युनियनमा अध्ययक्षमा रहदा सबै क्षिकहरुलाई एउटै बनाउने हिसावले काम गरेका थिएँ । गुमाएको त केही हैन ।
पार्टीको अधिवेसनको तयारीका बिषयमा तपाइको भन्नु के छ ?
मेरो मुझाईमा नेतित्व भनेको एक अवसर पाउनु हो । यदि अवसर पाएमा मेरो काम, कर्तव्य के हो, के कस्तो नीति छन भन्ने कुरा आफै ल्याउनु पर्छ । किनभने कुनै पनि काम गर्नको लागि बिस्वासीलो हुन जरुरी रहेको हुन्छ । तन मन लगाएर हामी कामगर्नु पर्छ र नै नेतृत्व पनि सफल हुन सक्छ ।
अवको काग्रेस कस्तो हुनु पर्छ ?
अबको पार्टीको नेतृत्व सवैलाई समेटने खालको हुनुपर्छ । पहिलेको अबस्थामा पार्टीको अबस्था पनि राम्रो थिएन र भुगोल पनि राम्रो थिएन त्यसैले विभिन्न ठाँउमा पुग्न असफल भयौ । तर अबको नेतृत्वमा हामी सवै क्षेत्रलाई समान अवसर दिएर तथा सवै विकस गर्ने र स्वतन्त्र बनाउने खालको हुनुपर्याे । हामी सवै ठाँउमा पुग्न सक्ने सवैको समस्या बुझन सक्ने पार्टी सभापतिको आवश्यकता रहेको छ ।
सुनसरी पाथीभरा गोल्डकपको फाइनलमा प्रवेश, रेड हर्ष क्लब इलाम २-० ले पराजीत
तिम्बुङ पोखरीको विवाद : मुन्धुम भर्सेस विष्णु भगवान !
महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाण्डौले निकिताको जाहेरी दर्ता गर्न मानेन
बसपार्क सञ्चालनमा कडाई
पाथिभरा गोल्डकपमा सेमिफाईनल चरणका खेल आजवाट, रेडहर्ष ईलाम र एलाभेन एरोज सुनसरी भिड्दै
पाँचथरका दलहरु चुनाबी तयारीमा